ब्रिटेनमा COVID-१ hes भ्याक्सिन हिचक - कोभिद १ V भ्याक्सिन लिनुहोस्
द्वारा TakeTheCOVID-19VaccineC अभियान अभियान | जन १ 18, २०२१ | फिचर गरिएको | ० टिप्पणीहरू
प्राध्यापक द्वारा डानियल फ्रीम्यान पीएचडी DClinPsy CPsychol FBPsS
महामारीले हाम्रो सामाजिक संरचनाहरूको परीक्षण गर्दैछ जस्तो कहिल्यै भएको थिएन। यसलाई सफलतापूर्वक सामना गर्न, हामीले हाम्रो मुख्य संस्थाहरूको नेतृत्वमा सामूहिक रूपमा सोच्न र कार्य गर्न आवश्यक छ। तर एकतामा जब एकता महत्वपूर्ण छ, के हामी अविश्वासको लामो समयदेखि र संक्षारक ड्रिप फिडका प्रभावहरू देख्न लागेका छौं?
COVID-19 खोपहरूको द्रुत विकास र परीक्षण एक असाधारण वैज्ञानिक उपक्रम भएको छ। अब के हुन्छ यथार्थमा अझ महत्त्वपूर्ण छ: खोपहरू एक प्रभावकारी हस्तक्षेप हो भनेर सुनिश्चित गर्न, व्यक्तिहरूले ती लिनुपर्दछ। विश्वव्यापी रूपमा लाखौं डोजहरू उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने व्यावहारिक चुनौतीहरू अवश्य पनि असीम छन्, तर समाजहरूले पनि खोपको संकोचको मुद्दालाई समाधान गर्नुपर्दछ: यो खोप अनावश्यक, अप्रभावी वा असुरक्षित हुन सक्छ भन्ने विश्वास छ (र हुनसक्छ सबै तीनै)। अचम्मको कुरा, यी सरोकार भएका व्यक्तिहरू खोप लिन अनिच्छुक हुन सक्छन्; तिनीहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा इन्कार पनि गर्न सक्दछन्।
महामारीले एक COVID-19 खोप फस्टाउन अविश्वासको लागि आदर्श सर्तहरू सिर्जना गरेको छ। समस्याको अंश जटिलता र ट्रान्समिशन र संक्रमणको परिवर्तनशीलता हो।
खोप हिचक नयाँ छैन। यद्यपि महामारीले एक COVID-19 खोपको फस्टाउन अविश्वासको लागि आदर्श सर्तहरू सिर्जना गरेको छ। समस्याको अंश जटिलता र ट्रान्समिशन र संक्रमणको परिवर्तनशीलता हो। यदि तपाईंले सामाजिक दूरी निर्देशनहरू तोड्नुभयो भने र तपाईंले यो भाइरसलाई समात्न सक्नुहुन्न भन्ने तथ्यले बिरामी हल्का हुन सक्छ यदि तपाईंले यसलाई पाउनुभयो भने, केहीले यस्तो निष्कर्षमा पुर्‍यायो कि त्यहाँ वास्तविक समस्या छैन। खोपहरू विकास गरिएको अभूतपूर्व गतिले चिन्तालाई पनि उकास्न दियो: त्यहाँ चिन्ता छ कि सुरक्षासँग सम्झौता गरिएको छ वा सम्भावित दुष्प्रभावहरूको हद र प्रकृति बुझ्नुभन्दा पहिले खोप बाहिर ल्याइन्छ। यसबाहेक, इन्टरनेट गलत जानकारीको साथ अस्वस्थ छ - षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू सहित - भाइरस, लकडाउन, र खोपहरूको बारेमा।
अन्तमा, यो दिमागमा राख्नु लायक छ कि यो सबै लामो अवधि पछि घटित भइरहेको छ जसमा विज्ञान, चिकित्सा, र प्रमुख संस्थाहरूमा विश्वास लगातार कमजोर भइरहेको छ। हामी स्वास्थ्य भाइरसहरु भरोसा छैन भने भाइरस को पार गर्न सक्दैन; तर वास्तवमा कति व्यक्ति प्रतिक्रिया गर्न prised गरिएको छ।
मा अक्सफोर्ड कोरोनाभाइरस स्पष्टीकरण, मनोवृत्ति, र वर्णन सर्वेक्षण (OCEANS), हामीले COVID-१ vacc भ्याक्सिन हिचकको हदको नाप राख्नको लक्ष्य राख्यौं: कति व्यक्ति खोपका बारे सशंकित छन्; जनसंख्याको विशेष वर्गहरू विशेषतः अनिच्छुक छन् कि छैन; र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, किन मानिसहरू हिचकिचाइरहेका छन्। ,,१44 वयस्कहरूले भाग लिए, उमेर, लि gender्ग, जातीयता, आय, र क्षेत्रको लागि बेलायत जनसंख्याको प्रतिनिधि।
पहिलो, राम्रो समाचार: हामीले एउटा COVID-19 खोपको पक्षमा ठोस बहुमत भेट्टायौं, 72% खोप लिन तयार भए। तर वास्तवमा सहमति मान्न यो पर्याप्त छैन। १1१TP१ टी जनसंख्या एक COVID-१ vacc खोप प्राप्त गर्ने बारेमा धेरै अनिश्चित छन्, र अरु १२१ टीटी १ टी ले ढिलो वा खोप लिनबाट जोगिन सक्छन्। बीस मध्ये एक जनाले आफूलाई COVID-19 को एंटी-खोपको रूपमा वर्णन गर्छन्।
भ्याक्सिन हिचकिचाहटको प्रभाव हामी सबैको लागि हुन्छ। खोप लगाईएको थोरै मानिसहरू, गम्भीर बिरामी हुनेहरूको संख्या बढी।
संकेतहरू यसका बारे छन्: हामी खोप बिन्दुको नजिक हुन सक्छौं, जब खोपको शंका मूलधारमा हुन्छ। पहिले नै हामीले भाइरसको बारेमा षडयन्त्र सिद्धान्तहरू देखेका छौं महत्वपूर्ण कर्षण प्राप्त गर्न। के COVID-19 खोप तिनीहरूको वेक अनुसरण गर्न हिचकिचाउने छ?
हाम्रो सर्वेक्षणमा, पाँच मध्ये एक व्यक्ति सोच्दछ कि खोप डाटा बनाइएको छ र अर्को चार मध्ये एक व्यक्ति यस्तो धोखाधडी भइरहेको छ कि थाहा छैन। किन यो कुरा गर्छ? भ्याक्सिन हिचकिचाहटको प्रभाव हामी सबैको लागि हुन्छ। खोप लगाईएको थोरै मानिसहरू, गम्भीर बिरामी हुनेहरूको संख्या बढी। साथै, हामीलाई अझै थाहा छैन कति जनालाई पूर्ण हड्डी प्रतिरोध क्षमता प्राप्त गर्न खोप लिन आवश्यक पर्दछ, तर 1०१टीपी १ टी को अनुमान गरिएको छ। चीजहरू खडा हुँदा, हाम्रो सर्वेक्षणले सुझाव दिन्छ कि फिगर प्राप्त गर्न सजिलो नहुन सक्छ।
भ्याक्सिन हिचकिचाहट मूलधारमा गएको हुनसक्दछ भन्ने डरले हाम्रो सर्वेक्षणमा अविश्वास विशेष समूहहरूमा सीमित नभएको तथ्यले सिर्जना गरेको हुन्छ; यसको विपरीत, यो जनसंख्या मा स्पष्ट थियो। युवा मानिसहरू, आइमाईहरू, कम आम्दानी हुनेहरू र कालो जातीय मानिसहरूमा हेसिटेन्सी थोरै थियो, तर संघहरूको आकार एकदम थोरै थियो। त्यसैले हामी COVID-19 खोपको हिचकिचाहटलाई सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारणहरूको सन्दर्भमा व्याख्या गर्न सक्दैनौं।
त्यसोभए, यी विश्वासहरूमा के छ? हाम्रो सर्वेक्षणले सुझाव दिन्छ कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको COVID-19 खोप सम्बन्धी धेरै मुख्य मुद्दाहरूको बारेमा सोच्ने तरिका हो:
• सम्भावित सामूहिक लाभ
CO COVID-19 संक्रमण को संभावना
Vacc खोपको प्रभावकारिता
Side यसको साइड इफेक्ट
Vacc खोप विकासको गति
त्यसोभए जो एक COVID-19 खोपको बारेमा हिचकिचाइरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई जसले खोपको सार्वजनिक स्वास्थ्य पक्षहरु बारे त्यति सजग नहुन सक्छ, आफूलाई बिरामीको महत्वपूर्ण जोखिममा नहेर्नुहोस्, खोपको प्रभावकारितामा शंका गर्नुहोस्, चिन्ता सम्भावित साइड इफेक्ट, वा डर छ कि यो धेरै चाँडो विकसित भयो।
जब म खोपका बारे उत्साहित मानिसहरुसँग कुरा गर्छु जब उनीहरू भन्छन कि यसले सबैलाई सहयोग गर्छ। यसको विपरित, खोपबाट सावधान मानिसहरू प्रायः आफ्नै परिस्थितिमा केन्द्रित हुन्छन्: उनीहरू मलाई भन्नेछन् कि उनीहरू बिरामी हुने सम्भावना छैन, उदाहरणका लागि, वा उनीहरूले खोप लिने हो भने के गलत हुन सक्छ भनेर चिन्ता गर्छन्। तर यो परिप्रेक्ष्य परिवर्तन हुन सक्दछ: जब मैले खोप लगाउने व्यक्तिलाई यस्तो सोच्न लगाएँ कि उनीहरूको नजिकको कोही विशेष गरी COVID-१ to को जोखिममा छ। उनीहरू भन्छन कि उनीहरू खोप लगाउने सम्भावना बढी हुन्छ।
हाम्रो सर्वेक्षणले देखाउँदछ कि व्यक्तिहरू विश्वस्त हुन चाहन्छन कि सुरक्षाको गति गतिको लागि त्याग गरिएको छैन। तिनीहरू प्रभावकारिता, सम्भावित जोखिमहरू, र कति लामो समय सम्म सुरक्षा रहनेछ भन्ने बारे सही र बुझ्ने मार्गदर्शन चाहान्छन्। र ती विवरणसँग डराउँदैनन्: सन्देशले हामीलाई पूर्ण तस्वीर प्रदान गर्दछ।
खोपका सन्देह, यो देखिन्छ, विश्वासको फराकिलो संकटसँग जोडिएको छ। हाम्रो डाटाले सुझाव दिन्छ कि खोप हिचकउने व्यक्तिहरूले डाक्टरहरूको अविश्वास हुने सम्भावना बढी छ, षड्यन्त्रको विश्वास राख्ने बढी सम्भावना छ, र संस्थामा थोरै वा विश्वास छैन। तिनीहरू पनि महसूस गर्न सक्छन् तिनीहरू अरूको तुलनामा कम सामाजिक स्थितिमा छन्। के हामी यहाँ देख्छौं जोखिम र अख्तियारमा भएकाहरूको अविश्वासको संयोजन हो। त्यो प्रतिरक्षा मा आफैलाई प्रकट गर्दछ। जो मानिस आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्दैनन् उनीमाथि प्रयोग गर्न नचाहनेहरू उनीहरू खोपबाट जोगिन्छन्।
अर्को केही महिना महत्त्वपूर्ण छ। सन्देश प्रवाह कडा र स्पष्ट हुनुपर्दछ: सबैको फाइदाको लागि, हामी सबैको कर्तव्य छ जब सम्भव भएमा खोप लगाउनु पर्छ। धेरै मानिसहरूले सुरुinationको अन्त्यमा खोपलाई प्रकाशको रूपमा देख्न सक्दछन्, तर तिनीहरू पक्का पनि देखिरहेका छन् - यथोचित तार्किक - उनीहरू विश्वास गर्न सक्ने जानकारीको लागि। हाम्रो सर्वेक्षणले देखाउँदछ कि उनीहरू पुन: आश्वासन चाहन्छन् कि सुरक्षा गतिको लागि त्याग गरिएको छैन। तिनीहरू प्रभावकारिता, सम्भावित जोखिमहरू, र कति लामो समय सम्म सुरक्षा रहनेछ भन्ने बारे सही र बुझ्ने मार्गदर्शन चाहान्छन्। र ती विवरणसँग डराउँदैनन्: नारा, साउन्डबाइट्स, र छनौट गर्ने बलहरू भन्दा, मेसेजिंगले हामीलाई पूर्ण तस्बिर प्रदान गर्नुपर्दछ।
यो ऊर्जावान, सक्रिय र खुला दिमागमा हुनुपर्दछ। कुनै गल्ती नगर्नुहोस्: खोप लिने व्यक्तिहरू COVID-19 खोप लिने कि नदिने भनेर लामो र कडा सोचिरहेका छन्। सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरहरू बाहिर र देशभरि रहनु पर्छ, चिन्ता सुन्नुहोस् र पारदर्शी रूपमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। सकेसम्म शक्तिशाली जानकारी प्रस्तुत गर्नु स्पष्ट रूपले आवश्यक छ, तर हामीले खोपको गलत सूचनाको प्रतिरोध गर्न, र सीमित गर्न पनि आवश्यक छ।
लामो अवधिको लागि हामीले सार्वजनिक संस्थानहरू र विज्ञहरूमा विश्वास पुन: निर्माण गर्नु आवश्यक छ - यस्तो कार्य जसले समाजलाई सीमान्तकृत गर्ने भावनालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ जसले धेरै मानिसहरूलाई विज्ञानको मूल्य र सत्यता र विशेषज्ञ ज्ञानका अन्य प्रकारहरूको प्रश्न गर्न लगाएको छ। वर्तमान महामारी जस्ता स clear्कटहरूले स्पष्ट पार्दा विश्वास हाम्रो समुदायको आधारशिला हो। यो बिना, सब भन्दा महत्वपूर्ण चिकित्सा सफलताहरू शंका को कारण जस्तो लाग्न सक्छ।
डानियल फ्रीम्यान अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, मनोचिकित्सा विभाग मा क्लिनिकल मनोविज्ञान को प्रोफेसर छ।
पढ्नुहोस्: 'COVID-१ vacc खोप बेलायतमा कचकच: अक्सफोर्ड कोरोनाभाइरस स्पष्टीकरण, मनोवृत्ति, र Narratives सर्वेक्षण (OCEAN) II' भित्र मनोवैज्ञानिक चिकित्सा.
← यदि मैले खोप लगाएको छु भने, के म अझै भाइरस लिन सक्छु? पीजे पोडकास्ट - COVID-19 खोपहरू: तपाईंको प्रश्नहरूको उत्तर →